Kedu ihe bụ tombolo na kedu ka esi akpụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Usoro nhazi ala nwere aha dị iche iche dabere na usoro mmụta ha na mbido ha. Taa, anyị ga-ekwu maka otu akụkụ ọdịdị ala sitere na mbido sedimentary nke amara dịka tombolo. Ọ bụ atụmatụ ọdịdị ala nke mejupụtara njikọta ala n’etiti agwaetiti na ala, nkume dịpụrụ adịpụ site na mbara ala, n’etiti agwaetiti abụọ, ma ọ bụ n’etiti nnukwu nkume abụọ. Anyị maara ụfọdụ ihe atụ nke ili ozu dị ka ala aja aja nke jikọtara Oké Nkume nke Gibraltar na ala.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka njiri mara tombolo na etu esi akpụ ya.
2 Kedu otu tombolo si guzobe
3 Ihe ngosi ama ama ama ama n’uwa
Usoro nhazi ala a na - eme n'ihi na agwaetiti na - ewepụta ntụgharị na ebili mmiri. Dị ka ọ na-adịkarị, ngbanwe a nke ebili mmiri na-etinye ájá na okwute na mpaghara ebe ha na-agbaji. Ka osimiri na-ebili, na-enye aka na sedimentation nke ihe niile ebili mmiri debe. Ihe ndị a akwagoro na-eme ụzọ dị ka nke anyị na-ahụ n'ihe banyere Chesil Beach. Tombolo a jikọtara Isle nke Portland na Dorset na-akọ akụkọ oke okwute n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
Ka anyị nyochaa tombolo nke nkume Gibraltar. Nkume a dị na nsọtụ ndịda ọdịda anyanwụ nke Europe na mpaghara Iberian Peninsula. Ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ karịa na limmonone promontory na elu nke 426 mita. Nkume a maara nke ọma maka ịnabata ihe dịka 250 macaques, primates ikpeazụ na anụ ọhịa na Europe. O nwekwara netwọ labyrinthine nke tunnels na, yana macaques, na-eme ka ọ bụrụ ebe ndị njem nleta na afọ niile. A na-ahụta nkume a dị ka ebe nchekwa eke.
A na-akpọkwa ili ndị jikọtara agwaetiti n’ihi na o yiri ka e kewachabeghị ha n’akụkụ ụsọ oké osimiri. Nhazi a nwere ike iyi ka ọ bụ naanị ya ma ọ bụ otu dị na otu. Mgbe anyị hụrụ ya n’ìgwè, ájá ndị ahụ na-aghọ ogige dị ka a ga-asị na ọ bụ ọdọ mmiri n’akụkụ mmiri. Ogologo mmiri ndị a na-adịru nwa oge ebe ọ bụ na ha ga-ejupụta na sedimenti oge.
Kedu otu tombolo si guzobe
Usọ mmiri a dị n'akụkụ osimiri na-ewere ọnọdụ mgbe ebili mmiri na-ebugharị ihe ahụ. Enwere ike ijikọta aja, ájá na ụrọ. Ugbo a na-agbakọta n'etiti osimiri na agwaetiti na-emepụta mpaghara nchịkọta nwere ike ịhụ dị ka agwaetiti ahụ jikọtara ya. Toralsọ asọpụrụ mmiri dị n'akụkụ ikuku. Ka ikuku wee na-etolite na-aga n’ihu, ikuku ikuku ga-adịkarị n’ebe ụzọ dịkarịsịrị mkpa. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ịkwakọba mmiri dịka otu ụzọ.
Mgbe ụfọdụ Ọ bụrụ na usoro ndị a emee n'ihi ụsọ oké osimiri, a naghị ewere ya dị ka ezigbo tombolo. Ezigbo tombolo bu nke ejiri site na ikuku na ebughi oke nke ebili mmiri. Ọrụ ndị a na-agbaso ike dị ike nke ikuku na-achịkwa. A ọdụ a n'isi kwupụta n'ụsọ oké osimiri na-akwụsịlata ka ha na-akpali site na-emighị emi mmiri. Nke a na-egbu oge bụ n'ihi esemokwu nke ebili mmiri na ala. Ike esemokwu a na-ebelata ọsọ ọsọ nke ebili mmiri na-aga ebe dị otú a nke na ha ga-agbaji.
Ọfọn, mgbe ị rutere n'àgwàetiti ndị ahụ, ha nọ nso n'ụsọ oké osimiri, N'ihi na ebili mmiri ahụ na-eji nwayọ nwayọ karịa ka ọ na-adị, ha na-agagharị gburugburu agwaetiti ahụ kama ịgafe ya. Ka mmiri na-eji nwayọ nwayọ na-agagharị n’agwaetiti ahụ, ọ na-achịkọta ekpochapụ n’ụzọ. A na-edebe ihe ndị ahụ ma nọgide na-agbakọta ruo mgbe ịmepụta ájá ájá nke jikọtara agwaetiti ahụ na atụmatụ ahụ. N'ụzọ doro anya, nke a ma ọ bụ ọ bụ ogologo oge na oge. Nke ahụ bụ, nke a metụtara ọkwa nke geological oge.
Ihe ngosi ama ama ama ama n’uwa
Ọzọ, anyị ga-akọwa njirimara njirimara nke akara ndị kacha ewu ewu na ụwa. Anyị malitere na nke dị na Chesil Beach. Ọ dị na Dorset, n’ebe ndịda England. Ihe e ji mara ya bụ ịdị elu ya nke dị otu narị mita na iri abụọ na ise elu nwee osimiri nke gbara kilomita iri abụọ na itoolu n’ogologo na mita 29 n’obosara. Nke a bụ ihe dị mkpa nke tomboy a na-akpọ ya World Heritage Site site n'aka UNESCO.
Tombolo ọzọ ama ama bụ nke Trafalgar. Ntube a na-abanye n'ime oke osimiri ma nye ya ube mara mma nke ezigbo aja. Ọ na-etolite ebe mara mma nke nwere oke osimiri dị ukwuu na mpaghara okwute na-enye echiche panoramic dị egwu. Mmasị na usoro a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ bụ naanị ihe atụ nke tombolo abụọ na Andalusia. N'ime ihe ọghọm nke ala anyị, anyị hụrụ na ebili mmiri asachapụ ntụ ọka ahụ ma mepụta tombolo abụọ sonyeere agwaetiti ahụ na ụsọ mmiri ahụ. Njikọ a agbakwunyela n'ime ime ya ntakịrị ịda mbà nke idei mmiri na-agba mgbe mmiri ozuzo dị elu karịa nke nkịtị. O sina dị, depressionda mbà a enweela ụbọchị ọ gụrụ kemgbe ihe ndị ahụ ga-eli ma belata omimi.
Mgbe oké osimiri ahụ talatara, ifufe kere usoro nke dunes n'ụsọ mmiri dị na ndịda agwaetiti ahụ. Ka oge na-aga, mbuze emewo ka fosilisation nke obi abụọ a. Taa osisi dị ka junipers na mastic kpuchiri usoro nile nke dunes a. E kwesịkwara iburu n'uche na ahịhịa na-eje ozi iji dozie ájá. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ okooko osisi nke okooko osisi okooko osisi, ụgbọ mmiri na lily nke na-enyere aka idozi ájá ma mepụta blanket mara mma.
N'ebe ndị a kwụsiri ike, anyị nwere ike ịchọta mpi oké osimiri, sagebrush na carnations. N'aka nke ọzọ, na mpaghara idei mmiri ahụ, anyị na-ahụ ahịhịa amị na-arụ ọrụ dị ka ebe obibi maka ndị nnụnụ dị iche iche dịka nnụnnụ mmiri, nnụnụ a na-akwụ ụgwọ uhie na nke nwere ụkwụ ojii.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe tomboy bụ na otu esi akpụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ tombolo
Ihe omuma nke Hypatia